UDAVID CROSBY WABELANA NGENGOMA ENTSHA EBHALWE NGOKU-STEELY UDONALD FAGEN: MAMELA - IINDABA
UDavid Crosby wabelana ngeNgoma eNtsha ebhalwe ngoku-Steely uDonald Fagen: Mamela
UDavid Crosby wabelane noRodriguez ngobusuku, ingoma entsha ebhalwe ngokubambisana noSteely Dan kaDonald Fagen. Ingoma ibonakala kwi-albhamu ezayo yeCrosby Simahla , ofika nge-23 kaJulayi, kanye ngaphambi kokuzalwa kukaCrosby iminyaka engama-80. Yimamele apha ngezantsi.
Ukuthetha no Amatye agiqekayo Ngo-2020, uCrosby wachaza indlela ukusebenzisana noFagen kwakukude ngayo. Kuhle kakhulu, ndoda, watsho ngelo xesha. Ndizukisiwe kakhulu wasinika iseti yamagama. Bendimcela isibini seminyaka. Waqala ukusithemba, ndiyacinga. Kuthathe ixesha elide, kodwa usinike iseti yamagama amangalisa ngokwenene kwaye sabhala nje ukuphuma kwawo.
Kwenye indawo kuqhubeke Simahla -Abizwa ngegama likaCrosby's ka-1970 ingoma kaJoni Mitchell enegama elifanayo-ziingoma ezibhalwe noMichael McDonald, imvumi-umbhali wengoma uSarah Jarosz, kunye nonyana wakhe, imvumi uJames Raymond. Yiva isembozo saSimahla apha ngezantsi, nawe.
lil intambo engapheliyo
Iigrama zegrama zango-2019
ngubani ingqokelela yokugqibela
icwecwe elitsha le-wrens
umthendeleko womculo we-meadows 2017
amakhwenkwe aselwandle ancuma uncumo